Taariikhda Allaha U Naxariiste Col: C/llaahi Yuusuf Axmed oo Kooban. - iftineducation.com
C/Lahi Yuusuf Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo December sanadkii 1934.
Sanadkii 1964tii ayaa loo Dalacsiiyay darajada Gaashaanle dhexe “Lieutenant Colonel” waxaa uuna isla markaasi u soo gudbay maamulka dhexe ee wasaarada gaashaandhiga soomaaliya.
Markale ayaa lagu celiyay gobolada woqooyiga soomaaliya sanadkii 1969kii isagoo halkaas looga dhigay abbaanduulaha ciidankii looyaqaanay “ciiidanka koobaad” ee fadhigooda woqooyiga soomaaliya.
Sannadkii 1978 waxaa dhacay inqilaabka loo yaqaan ‘Inqilaabkii dhicisoobey’, Waxa uu u galay dalka Itoobiya.
Waxa uu tegey Gobolada Waqooyi Bari ee Soomaaliya, halkaas oo uu madaxweyne ka noqday Dawlad Goboleedkii la asaasay bartamahii sannadkii 1998. Waxana uu halkaas madaxweyne ka ahaa ilaa uu ka aadey Eldoret/Nairobi Kenya oo lagu soo dhisayey DFKMG.
Markey taariikhdu tahay October 10, 2004 ayuu C/Laahi Yuusuf noqday madaxweynaha FKMG ee Dawlada Dhexe ee Soomaaliya. Jagadaas oo uu muddo ku taamayey in uu gaaro. Waxana uu dhawr jeer intii uu shirka Kenya socdey ku celceliyey in uu asagu bilaabay dhibka Soomaaliya uuna asagu dhamayn karo.
December 24, 2008 ayaa waxaa soo shaac baxay in C/laahi Yuusuf uu iska casilayo madaxweynaha DFKMG.
Isniin December 29, 2008 (oo ku beegnayd 1dii bisha Koowaad ee Muxarram ee sannadka cusub ee Hijrada 1430) ayaa C/laahi Yuusuf iska casiley xilka madaxweynaha DFKMG, kaddib markii uu cadaadis kaga yimid beesha Caalamka, sida uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey baarlamaanka Baydhabo oo uu warqaddii is casilaadda ku wareejiyey guddoomiyaha baarlamaanka DFKMG sida uu dhigayo dastuurka FKMG.
Cabdulaahi Yuusuf Axmad Magan Galyo uu Ka Helay Dowlada Yaman U guuray Magaalada Sanca Balse Sanado Kadib Ayaa Waxaa Halkaasi Ka Dilaacay Ururka Alqa’ida oo C/llaahi yusuf Si weyn u Necbanaa Taasoo Sababtay In uu U wareego Dubaia oo uu Ku geeriyooday.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/laahi Yuusuf oo Geeriyooday.